Rolls - omunye ezichumayo ekhaya baking. Zenze Ingadla bamane futhi masinyane. Cabanga embodiments njengoba kungenzeka uzilungiselele, isibonelo, Rolls ne jam. Indlela yokuqala Kusekelwe ikhekhe sponge. Ukulandela izindlela wesibili nowesithathu, kungenzeka ukuthola Akumangalisi imvubelo Fluffy namakhekhe.
Indlela ukupheka esiphundu bhisikidi imiqulu ne jam? amathiphu
Ungadliwa for lokhu dish isixuku esikhulu, kodwa kwaba nge ukupheka okufana ezifana ukuqala Omuny ongenalwazi. Kungaba yini elula kuka ukubhaka ikhekhe kusukela test emoyeni, bese Fluff it up and Roll? Kodwa kuvela kukhona okuningi izimfihlo zendlela yokwenza imiqulu ne jam. Okokuqala, udinga ukulungisa ukukhanya kanye Airy inhlama, zihlalo ke bhisikidi ngeke kwaqinisekiswa. Okwesibili, kudingeka ngokucophelela ukhethe toppings ukuthi kwaba kokubili aminyene futhi namanzi. Okwesithathu, isidingo zifunde indlela yokwenza into ebaluleke kakhulu - ngobumnene kakhulu Songa ngaphuthelwa ikhekhe. Lena akuyona sokuwunikeza kudambe ngokuphelele, kodwa kuyoba nzima kakhulu ukwenza umsebenzi ashisayo. Okuhle kunakho konke, lapho ikhekhe Kusafudumele ngokwanele. Kulokhu, inqubo kuyokwenzeka ngaphandle izikhathi ezingemnandi ezingadingekile lapho roll lungaqhekeza ngisho liqhume torsion. Cabanga kabanzi izinyathelo nokulungiselela.
Recipe bhisikidi imiqulu
Ngaphambi kokuqala inhlama Mboza iphepha baking isikhumba kanye elingenamikhono ngamafutha. Ungabese uqhubekele ukulungiswa mass aluhlaza baking bhisikidi ikhekhe. Olungasihlukanisa izikhupha amaqanda 5 esiqandisini. Hlanganisa nabo, bezihlikihla elimhlophe-faceted nge ½ inkomishi ushukela. I amaprotheni asele ufane mixer endaweni (ongaphakeme) isivinini kuqala bese ngesikhathi esiphezulu. Ekupheleni inqubo, shukela (1/2 inkomishi). Ungqimba lokuqala ngobunono aliveza kanti eyesibili, oqeda spoon kuya phansi, uhlanganise kancane. Khona-ke izingxenye ezincane uqale ukungena sifted kafulawa (1 inkomishi ephelele), kanye vanilla (1 isikhwama esincane). Isisindo kumele ahlale aluhlaza kanye Airy. Ukubeke ngokulinganayo phezu ungqimba okulungiselelwe baking 0.7-1 cm. Bhaka ikhekhe kuhhavini osuke usushisa kakade imizuzu 12-15. ukususa ngokucophelela iphepha isipanji ikhekhe kusukela pan. Khona-ke, njengoba kudedelwa le iphepha, baqala gcoba it ne jam, okuyinto thatha cishe inkomishi eyodwa nengxenye. Uphakamisa futhi twist, ukuzama ukwenza umqulu Friend. Beka umkhiqizo endaweni epholile ukuze sifakwe emanzini.
Imvubelo roll ne jam: aluhlaza baking iresiphi
Ukuze lo mkhiqizo, idinga isikhathi esiningi. Ubisi osuke usushisa kakade (2 ingilazi faceted) chaza ingcosana usawoti, 3 art ephelele. l. ushukela, amaqanda 2, washaywa. Ngalesosikhathi thela phezulu iphakethe imvubelo osheshayo. Ngemva isiyaluyalu yabo nokuvuvuka ufulawa ukuze udlulisele kwabantu ngobuningi ukhilimu omuncu. Let ume cishe isigamu sehora nhlama ebilisiwe bese uxove inhlama lula uncool. Yibeke isitsha, wafaka endaweni efudumele ukusondela. Imvubelo mass Fluffy roll ku kwesigubhu naphakathi ukujiya kanye gcoba ujamu. Ngemva kwalokho, angase umqulu ezakhiwe evala ungqimba ukugcwaliswa. Beka isidlo baking kwi baking sheet blank, shayela ne Iqanda isikhuphasha phezulu bese uvumele ukuma kuze ukukhuphuka kancane ivolumu. Preheat kuhhavini lokushisa 200-220 ° C, bese kancane ukwenqaba ukushisa. Bhaka isinkwa for isigamu sehora. Ngaphambi evunyelwe ukulinda kuze imikhiqizo sesizogcwala indlu.
Izimfihlo ukupheka imvubelo "lemiklamo"
Rolls ne jam kungenziwa wabhaka ehlukile kancane. Kuze kube yimanje, akusiyo sekudingeka ukuba kubunjwe umkhiqizo Patty test. Ngezinye izikhathi besifazane abaningi ubhake kangaka ekuqhumeni imiqulu, ujamu kanye ugobhozela. Ngakho-ke ozikhethela ngezinye izikhathi kahle ngaphezulu ngaphambi Baking ihlukaniswe kuyo yonke preform zibe yizicucu eziningana ngokulinganayo obujwayelekile. Ngokuvamile uthole akukho ebanzi kuka 4-5 cm. Khona-ke, walala bhaka akuyona esondelene kakhulu komunye nomunye, Kuvunguza ngamunye roll ne jam (bheka isithombe). Indlela salokhu isidlo ungasebenzisa yimuphi omunye odlule noma nge khona imvubelo kwengoma. Njengoba ukugcwaliswa esikhundleni ujamu, ungakwazi ukuthatha ushizi, izithelo ezomisiwe noma amantongomane. Ungakhohlwa ukuthi imikhiqizo ngaphambi bayobhaka kufanele kube kancane isinyathelo futhi uphakamise izwi. Kudingeka nokuba gcoba amaqanda abo noma bhotela. Iphele Kuvunguza ikhava ocwebezelayo noma kancane ufafaze ushukela oluyimpuphu. izingcezu Portioned aselungele kuhanjiswa!
Indlela ukupheka pancake?
Turkey cutlets kwansuku futhi imenyu samaholide
Sosuku Lwengculazi Lomhlaba Wonke, 1 Disemba: umlando
Nokususa - ke ... incazelo Process. ebhentshini bushelelezi